Ny smartwatch Michael Kors Sofie dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana andrasana indrindra | Androidsis
Ny mpanamboatra Michael Kors dia manohy miady mba hahazoana toerana eo amin'ny tsenan'ny smartwatch amin'ny fanomezana vahaolana tena mahaliana. Efa nilaza taminay momba ny modely sasany izahay, toy ny Fidirana Michael kors, ary anjaran'ny maodely vaovao indray ny mifehy ny famantarana lehibe anananay. Ny anaranao? Michael Kors Sofie tahan'ny fo, a manan-tsaina fiambenana Manolotra famolavolana tena manintona sy fiasa vitsivitsy izay hahafaly ireo mpampiasa manam-pahaizana indrindra.
Amin'izany fomba izany, ny vaovao smartwatch Michael Kors Sofie ny tahan'ny fo, Izy io dia manana karazana sensor rehetra mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa be mpitady indrindra. Ary izy rehetra nofonosina vatana vita amin'ny aliminioma mba hanolorana endrika mahonon-tena izay mampisavoritaka tanteraka azy io amin'ny famantaranandro nentim-paharazana.
Efijery AMOLED, GPS ary antsipiriany hafa momba ny tahan'ny smartwath vaovao Michael Kors Sofie
Mitohy amin'ny famolavolana smartwatch Michael Kors Sofie Fiakaran'ny fo, mba hilazana fa ity modely ity dia tonga miaraka amina tadiny azo ovaina ary afaka hitantsika amin'ny volamena, mavokely, volafotsy ary feo avo roa heny izy ity. Ary mitandrema, ao ambanin'ny hood dia mahita zavatra tsy ampoizina mahaliana isika. Hanombohana azy dia manana efijery AMOLED izy, noho izany ny kalitaon'ny atiny asehontsika eo amin'ny tontolony dia azo antoka kokoa.
Izany dia tsy maintsy ampiana sensor hafa, izay miavaka ny NFC, hanaovana fandoavam-bola amin'ity Michael Kors azo ampiasaina ity, GPS, sensor tahan'ny fo. Ho fanampin'izany, manana fanoherana ny vovoka sy ny rano izy, afaka milentika hatramin'ny 30 metatra, mety tsara mankany amoron-dranomasina miaraka amin'ity Michael Kors Sofie Heart Rate ity nefa tsy manahy na inona na inona. Ary ny fahatsiarovany 4 GB sy batterie 300 mAh dia mihoatra ny fanomezana ny filan'ny mpampiasa rehetra. Ny vidiny? Hahatratra ny tsena amin'ny vidiny 300 euro eo ho eo izy io, tarehimarika mahazatra ao a manan-tsaina fiambenana miaraka amin'ireo toetra ireo. Ho afaka hijoro amin'ny Apple Watch ve ianao na ny smartwatches farany natolotry Samsung?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny smartwatch Michael Kors Sofie dia havaozina miaraka amin'ny fanatsarana andrasana indrindra
Namoaka Samsung Galaxy View 2 vaovao
Manitsaka ny tany sinoa i Realme: tsy ho ela dia hanitatra ny faravodilanitra izy